Saraakiil ka tirsan Dowladda oo Faah faahin ka bixiyay halka lala Damacsanaa Qaraxii Zoobe. – XAMAR POST
Sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxi ay dadka badani ku dhamaadeen ee Sabtidi ka dhacay Muqdisho uu bartilmaameedkiisu ahaa saldhigga ciidan ee ay Dowlada Turkiga dhawaan ka furtay magaalada Muqdisho.
Dhinaca kalana, agaasimihi hore ee Hey’adda Nabadsugida Qaranka Soomaaliya Axmed Macallim Fiqi ayaa sheegay in bamki lagu qarxiyay isgoyska Zoobe lagu soo diyaariyay dhul beera ah oo ku yaala duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Saraakiisha amniga ee Dowlada Soomaaliya ayaa sidoo xaqiijiyay in ay su,aalo weydiinayaan darawalka baabuur Toyota Noah ah oo isna Sabtidi hore ku qarxay magaalada Muqdisho. Waxay kaloo sheegeen in ay xireen afar nin oo looga shakisanyahay in ay ka tirsanyihiin Al-Shabab isla markaana lala xiriirinayo qarraxi lagu baaba,ay ee Muqdisho.
Dowladaha Moroko, Sudan Iyo Shiinaha Oo Cambaareeyey Qaraxii Dhawaan Ka Dhacay Muqdisho